बौलाहा कुकुरले टोकेर एकैदिन ५० जना भन्दाबढी घाइते - Health Today Nepal
बौलाहा कुकुरले टोकेर एकैदिन ५० जना भन्दाबढी घाइते
October 2nd, 2019 समाचार0comments
महोत्तरी,१५ असोजः महोत्तरीमा बौलाहा कुकुरले आतंक मच्याएको छ । बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट मंगलबार एकै दिन ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । अस्पतालका अनुसार महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका, जलेश्वर नगरपालिकासहितका स्थानमा बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट एकैदिन ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका हुन् ।
बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट घाइते भएकाहरूको जलेश्वर अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताल रिफर गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । जलेश्वर अस्पतालका फिजिसियन डा. मृत्युञ्जय ठाकुरले अस्पतालमा आवश्यक औषधि एआरभी र इम्युनोग्लोबलिन इन्जेक्सन उपलब्ध नभएका कारण घाइतेलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा रिफर गरिएको जानकारी दिए ।
कुकुरको टोकाइबाट घाईते भएकाहरू मंगलबार दिउँसो दुई बजेदेखि अस्पतालमा उपचार गराउन आएका थिए । डा. ठाकुरका अनुसार सुरूमा महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिकामा घाइते भएकाहरू आए पनि साँझदेखि महोत्तरीको विभिन्न स्थानबाट उपचार गराउन आइरहेका हुन्।
बौलाहा कुकुरले सुरूमा महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिकामै २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई टोकेको थियो। महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले कुकुरका कारण ज्यानै जोखिममा परेपछि कुकुरलाई गोली नै हान्न निर्देशन दिएको बताए । बौलाहा कुकुर मार्न बीस जनाको संख्यामा प्रहरी टोली खटाएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
Previous article शौचालयमा मोबाइल फोन चलाउँदा पाइल्स हुने खतरा
Next article यी आयुर्वेदिक उपाय अपनाउनुस्, अल्सरको समस्याबाट छुटकारा पाउनुस्